Morontsiraka Bali ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Bali tora-pasika
Ny torapasikin'ny morontsiraka atsimo andrefana
Kuta angamba no toeran'ny mpizahatany malaza indrindra any Bali. Kuta dia malaza amin'ny surf, bar, club ary fiainana miaina amin'ny alina. Eto, trano mora vidy, misy teti-bola be dia be, ka ny kitapo toy ny tanàna. Ary ny moron-dranomasin'i Kuta dia notsidihin'ny tanora indrindra, izay mandeha amin'ny antoandro, ary miala amin'ny alina. Eto koa dia tonga any Aostraliana marobe izay mandeha amin'ny faran'ny herinandro. Ho fanampin'izany, ny faritr'i Kuta no akaiky indrindra amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny morontsiraka rehetra any Bali. Amin'ny arabe tsy lavitra akory dia tsy mivoaka ny fifamoivoizana na dia amin'ny alina aza.
Ao anaty rano dia azo atao ny fifandonan'ny mpandeha vao manomboka. Na izany aza, raha te-handeha hisidina ianao, Kuta Beach dia hifanaraka aminao. Afaka manofa birao eto ianao amin'ny vidiny $ 5 mandritra ny 2 na 3 ora. Eto amin'ity torapasika ity koa no ifantohan'ny ankamaroan'ny sekoly misidina, ary Rosiana ny sasany. Raha tianao ny miantsena dia tianao izany eto koa.
Ity torapasika ity amin'ny ankapobeny dia mitohy amin'ny fanohizana ny moron-dranomasin'i Kuta, saingy somary manaja kokoa izany. Misy be dia be ny surfing be, fa kely noho ny amoron-dranomasina Kuta. Manofa lakolosy sy umbrella azo alaina amin'ny olon-drehetra fa tsy fananana trano fandraisam-bahiny iray izy ireo. Lava io tora-pasika io ary amin'ny fantsom-panazavana dia lasa midadasika sy mahafinaritra ny fandehanana na ny fitsangatsanganana. Vitsy ny mpankafy isan-karazany ary ny trano no lafo kokoa. Na izany aza, ny ranomasina dia mety tsara kokoa amin'ny fisafoana noho ny milomano, satria amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia lehibe ny onja aty. Ankoatr'izay, ireo sahy miakatra ao anaty rano tsy misy birao, dia averina an-tanety ireo mpamonjy voina izay miasa eto.
Seminyak dia iray amin'ny toerana any Bali sy ny tora-pasika eo amboniny, izay mandeha avy hatrany aorian'ny Legian. Malemilemy kokoa sy milomano kokoa ity tora-pasika ity, eo amoron-dranomasina misy ny trano fandraisam-bahiny sy kintana 4-kintana eo akaikiny. Lafo ny trano eto. Malalaka be ny morontsiraka Seminyak. Eto ianao dia afaka manofa tranoben'ny masoandro miaraka amin'ny elo. Ny sain'ny loko mena dia apetraka eto foana, ary ny onja dia matetika. Ireo mpandefa sambo koa matetika. Azo atao ny manofa birao eny amoron-tsiraka, na dia somary misondrotra kely aza ny tariff raha oharina amin'i Kuta. Seminyak dia hotely tsara akaikin'ny tora-pasika - Anantara Seminyak Resort and Spa.
Mora ny mitady trano amin'ny vidiny mora, ary ny mpizaha tany amin'ny Canggu dia kely kokoa raha ampitahaina amoron-dranomasina Kuta. Ny maraina ianao no mahita mpikaroka sy mpihazakazaka irery ihany. Amin'ny ankapobeny, ny moron-dranomasina dia tena mendrika, lehibe, saingy mety ho an'ny fandehanana, ny jogne ary ny fiposahan'ny masoandro. Misy ny trano fandraisam-bahiny sasany misy ny elo ao amin'ny elo, fa matetika ireo zona ireo dia foana. Ireo te-hilomano, mandeha any amoron-dranomasina hafa na mamirapiratra manodidina ny dobo, satria misy ihany koa ny olana eto, izay mitaky ny hisambotra ny fotoana rehefa tsy misy onja.
Noho ny fanamaivanana any ambany dia mahery vaika sy avo noho ny Kuta, Legian ary Seminyak. Ny eo akaikin'io toerana io dia misy trano fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa aristokratika antsoina hoe Hotel Tugu, tompon'ny mpanangona antikoly lehibe indrindra any Indonezia.
Tany amoron-dranomasina ity no misy an'i Canggu. Toa ny farany ihany ary mety kokoa ho an'ny surfers. Aty Echo dia misy vitsivitsy misakafo masoandro sy trano fisakafoanana kely. Miangona eto ny olona matetika amin'ny hariva. Ary nony maraina sy tolakandro, dia tsy nisy olona hita. Ny eo akaikiny dia ny tempoly, izay mitana ny toeran'ny sisintany eo anelanelan'ny torapasikin'i Canggu sy Echo.
Fahasamihafana amin'ny halavany lehibe. Nitsangantsangana teo akaikin'ny tanànan'i Jimbaran izy ireo nandritra ny km maromaro. Manakaiky ny tora-pasika amin'ny halavany manontolo ny trano fisakafoanana sy hotely. Miala eo akaikin'ny morontsiraka izy io, dia mandehandeha lavitra. Amin'ny tondradrano avo dia lasa zoro tery ny Pantai any Jimbaran, izay metatra vitsy monja ny sakany izay any amin'ny toerana sasany. Na izany aza, amin'ny rano ambany, ny rano dia mikoriana ampolony metatra. Tsy ambany ny ambany. Teo akaikiny dia trano fandraisam-bahiny 4 sy kintana 5 toy ny Ayana sy InterContinental Bali. Io tora-pasika io ihany no malaza amin'ny tsenan-trondro sy ny trano fisakafoanana misy azy miaraka amin'ny lovia trondro, mametraka latabatra amin'ny hariva ao anaty fasika, manolotra mpizaha trondro sy hazan-dranomasina.
Ity morontsiraka ity dia misy ao amin'ny vohitra misy ilay anarana hoe Dreamland. Izy io dia faritry ny morontsiraka kely nefa tsara tarehy, rakotra fasika fotsy, misy rano turquoise, na dia tsy dia milamina aza ny ranomasina eto. Noho izany antony izany, ny ankamaroan'ny mpanao vakansy, rehefa tonga eo amin'ny Dreamland Beach dia mijanona eo amin'ny fasika fotsiny, tsy sahy miditra ao anaty rano. Saingy noho ny onja avo be dia be ity toerana ity dia malaza amin'ny pasitera tonga any Bali. Misy fanofa-masoandro sy elo, ary koa ny trano fisotroana.
Izy io dia amoron-dranomasina lehibe, aseho amin'ny halavany sy ny sakany. Kely ny loko, mavo. Fantatra amin'ny fambolena tsara tarehy misy azy i Balangan Beach, izay misokatra avy amin'ny hantsana, ary koa ny fanampiana "Martian" akaikin'ny morontsiraka. Ny kafe sy ny seurs amin'ny masoandro dia mipetraka saika manerana ny morontsiraka amoron-dranomasina, na izany aza dia vitsy ny olona eto. Mandritra ny Balangan, ny morontsiraka dia rakotra volkano, izay rakotra molotra maitso malemy, izay manana endrika tsara tarehy ary manintona mpaka sary, nefa tsy mamela anao hiditra ao anaty rano miaraka amin'ny tongotra miboridana.
Na dia misy trano fandraisam-bahiny marobe eo akaiky aza, ary maro ny toeran-tsakafo eny amin'ny moron-dranomasina, sarotra ny milomano eto. Ny mpandilika ihany no miditra ao anaty rano mba hivezivezena amin'ny toerana misy azy ary mahazo onja tsara. Mety ho tratran'ny lalana maharikoriko ny tora-pasika. Tsara ny mandeha bisikileta eo aminy. Ranomasin'i Balangan sy ny hantsana akaikiny no toerana malaza amin'ny fampakaram-bady.
Tena be ny farihy, ary madio sy madio ny rano. Ny ony tsy lavitra ny morontsiraka dia saika tsy dia avo avokoa. Toe-javatra tsy fahita firy io ho an'ny Bali. Azo atao eto ny Surfing, fa mila mandeha lavitra ny onjan'ny onja ianao. Ireo izay miala amin'ny morontsiraka, miaraka amin'izany, dia tsy matahotra ny ho tratry ny takelaka, tsy toa an'i Kuta. Rehefa dinihina tokoa, ny mpandeha mpitety za-draharaha dia mitaingina eto, manao lavitra ny morontsiraka. Matetika misy fifaninanana amin'ny fisafoana. Toeram-pihetsika kely goavambe be loatra i Padang Padang. Akaiky be dia be amin'ny lalana. Toa ny andiany avy amin'ny hantsana manaraka ny tohatra vato. Noho ireo antony ireo dia malaza amin'ny mpizahatany i Padang Padang. Amin'ny vanim-potoana avo, be ity tora-pasika ity. Ity no minus lehibe indrindra.
Indray mandeha i Padang-Padang dia torolàlana "tsiambaratelo", izay tsy fantatra afa-tsy eo an-toerana, fa ny sarimihetsika "Mihinana, Mivavaha, Fitiavana", izay ampahany voatifitra eto, dia nampalaza io torapasika io. Misy trano elo misy fijanonana, nefa tsy misy mason'andro maizina. Misy kafe kely kely manasa zava-pisotro, sakafo kely sy sakafo tsotra. Misy kiraro sy ny tora-pasika azo alaina ao. Tena mahafinaritra ny toerana eto, noho izany, raha betsaka ny mpanao vakansy tsy handroaka anao, afaka miakatra amin'ny vatolampy ianao mba hankasitrahana ilay zava-misy. Eo an-tampon'ny hantsana akaikin'ity morontsiraka ity dia trano fandraisam-bahiny Blue Sky tsara misy trano fisakafoanana sy dobo filomanosana (tondraka).
Malefaka sy fotsy ny fasika eto, lava be ny morontsiraka, voahodidin'ny lokanga tsy misy pentina. Afaka mahazo sary fakana sary mahafinaritra ianao. Na izany aza, i Bingin dia tsy mendrika hilomano. Eto ianao dia afaka mirehitra fotsiny, fa na dia any amin'ny morontsiraka aza dia be bà be. Misy onja tsara amin'ny onjan-drano. Matetika tonga eto ny fianakaviana, fa amin'ny 90 isan-jaton'ireo tranga ity dia mifarana amin'ny lohan'ny fianakaviana milomano eny amin'ny solaitrabe, ary mijanona eny amoron-dranomasina ny reny sy ny zaza. Na izany aza, ho an'ny ankizy dia tsy ratsy ity tora-pasika ity. Ny hotely dia eo amin'ny morontsiraka sy ny hantsana. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy misy frills manokana, fa ny hotely roa dia mirehaka dobo tsy manam-petra.
Iray amin'ireo torapasika tsara indrindra any Bukit. Rakotra fasika tsara tarehy izy io. Madio sy mazava ny ranomasina eto. Rehefa mifindra mianatsimo avy eo avaratra, ny lalana voalohany dia ny Nusa Dua, avy eo i Menghiate, arahin'i Heger. Matetika ireo tora-pasika 3 ireo dia mitambatra, hiantso azy io ho morontsiraka tokana ao Nusa Dua, fa matetika i Heger dia mizara mitokana. Eto ianao dia afaka manofa tranom-patin'ny masoandro, elo, misy trano fisotroana, hetsika an-drano - manofa lakozia, lakana, saron-tava ho an'ny snorkeling. Misy hotely maro eo akaiky eo manolotra fitaterana maimaimpoana mankany amin'ny Pantai Heger, noho izany dia azo atao ny mandinika ao amin'ny hotely iray tsy akaikin'ny morontsiraka, raha miaraka amin'izany dia afaka mandeha eny amin'ny tora-pasika ianao amin'ny fotoana rehetra.
Ny antsasaky ny moron-dranomasina ity dia manerana ny tanàna, ny fandroana masoandro dia ho an'ny rehetra, ary ny antsasa-piainana ampahibemaso, ny eo akaikin'ny trano fandraisam-bahiny, Mulia Hotel. Ho an'ireo izay maniry ny hipetraka ao amin'ny efitrano miloko izay tsy mijery ny ranomasina, ny fialan-tsasatra isan'andro amin'ny morontsiraka milamina, ny milomano amin'ny rano madio, ny hotely dia iray amin'ny safidy tsara indrindra any Nusa Dua. Manakaiky ny morontsirak'i Geger misy valan-javaboary vita amin'ny vato, misy koa ny haran-dranomasina ao ambanin'ny rano, noho izany dia tsy misy onja manakaiky ny morontsiraka, milamina ny ranomasina eto, tsy misy morontsiraka morontsiraka eo anelanelan'ny tanàna sy ny faritra hotel.
Ilay torapasika kely nafenina eo anelanelan'ny hantsana. Amin'ny tondradrano avo dia dibo-drano tanteraka ny rano. Afaka miditra ao Uluwatu (anarana hafa - Suluban) ianao amin'ny alàlan'ny lava-bato. Noho ny onjan-dranomasina be dia be io tora-pasika io amin'ny ankamaroan'ny mpisitrika. Azon'izy ireo atao ny manararaotra ny fotodrafitrasa novolavolaina - marobe ny teboka varotra sy manofa ny zavatra rehetra ilainao amin'ny surfing, manomboka amin'ny birao, miafara amin'ny akanjo manokana. Raha tsy mikasa hikoropaka ianao dia afaka mipetraka amin'ny kafe amin'ny hantsana. Misy fahafahana homena masoandro. Misy planina kely miaraka seza fisoloana trano manofa trano.
Io tora-pasika io dia mety ho an'ireo maniry hisotro ronono. Ny fiovan'ny masoandro sy ny fandehanana irery miaraka amin'ny onjan-dranomasina dia mitondra fahatsapana mahafinaritra. Tsy azo atao eto anefa ny milomano. Na dia mazava be aza ny rano dia mety ny hisidina i Niang Niang, saingy na dia somary vitsy aza ny mpandeha eto. Afaka 100 metatra avy eo no hitazana azy ireo. Tsy hita eto koa ny fotodrafitrasa. Alokaloka voajanahary dia noforonina tamin'ny hazo kely sy any amin'ny toerana eny ambony vatolampy. Niang Niang dia morontsiraka somary lava, afaka mandeha, misaintsaina, miala sasatra mandritra ny fotoana maharitra.
Amin'ny toerana sasany amoron-dranomasina, ny fasika dia afangaro amin'ny haran-dranomasina sy ny akorandriaka, ka ho afaka manangona fanangonana mihitsy aza ianao. Ambony eo amin'ny hantsana dia hotely, kafe ary dobo tsara iray.
Pandava dia manana lavarangana tokana izay mandeha amin'ny fefy vatomanga. Tena lava ity tora-pasika ity, rakotra fasika fotsy, madio tanteraka ny ranomasina. Mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny fanofa trano, elo sy kayak. Manakaiky ny morontsiraka dia misy ny dia an-tongotra, ary eo dia misy cafées maromaro. Ny ranomasina eto dia manana loko marevaka ary mangarahara tanteraka, misy koa ny onja, koa azo atao ny fiparitahana fa tsy eo akaikin'ny morontsiraka.
Pandava dia mety ho an'ny ankizy sy ho an'ireo mitady fialam-boly mavitrika. Misy tohana hafa noho ny any amin'ny morontsiraka hafa any Bali. Na izany aza, mbola misy maro amin'izy ireo kokoa noho ny morontsiraka noho ny ranomasina. Misy zohy roa eo an-tsisin'ny tora-pasika sy gazebo iray azo sary.
Izy io dia tora-pasika misy fasika fotsy sy rano madio turquoise. Maharitra ny morontsiraka, fa be mponina kosa. Ny hany trano fandraisam-bahiny akaikin'ny morontsirak'i Nikko dia i Grand Nikko. Satria, amin'ny alàlan'ny lalàna, tsy misy tora-pasika any Bali mety ho faritra tsy miankina hotely, afaka miala sasatra avokoa ny rehetra eto. Eo an-tampon'ny hantsaha misy ny fiantsonan'ny fiara, ny tohatra dia midina ho any. Misy ny trano fidiovana misy ny fandroana eny amoron-dranomasina sy ny sezan'ny trano fandroana masoandro miaraka amin'ny elo. Misy serivisy fanamafisana koa. Ny zava-pisotro ihany koa amidy eto.
Torapasik'i Nusa Dua
Ao Nusa Dua, ireo torapasika dia manome fialan-tsasatra milamina sy milamina, tsy lavitra ny fihantsiana sy ny fialamboly. Ity faritra ity dia somary mitokana any amin'ny sisa amin'i Bali. Azonao atao ny miditra amin'ny faritany amoron-dranomasina amin'ny alàlan'ny vavahady. Ny mpiambina amin'ny raharaha sasany dia manontany hoe inona ny hotely hotsidihinao ary indraindray tsy manontany na inona na inona izy ireo. Avy amin'ireo mpizahatany izay nijanona tao Nusa Dua ary tsy nandeha tany an-toeran-kafa tany Bali, dia afaka mandre matetika fa Bali tena mahafinaritra, nefa mankaleo.
Ny morontsiraka any Nusa Dua dia kalitao tsara, madio sy midadasika izy ireo, saingy akaikin'ny morontsiraka kosa dia malefaka. Raha ny fitsipika dia tsy manakana ny lomano na hianatra ny hisidina izany. Mandeha eny amin'ny Internet izy ireo, na dia mahalana aza. Ny ankamaroany amoron-dranomasina ao Nusa Dua dia natao ho milomano. Ny ankamaroan'izy ireo dia mipetraka akaikin'ny faritry ny hotely. Tsy tokony hisy foana ny fotoana handaminana am-pilaminana raha toa ka tsy vahiny trano fandraisam-bahiny ianao, satria mety hisy loza hihaonana am-bava, fa mpiambina maharitra. Na izany aza, ao Nusa Dua dia misy moron-dranomasina manerana ny tanàna, na izany aza dia tsy dia salama loatra. Teo akaikiny dia mbola misy toerana mahaliana iray toy ny «Bridge's Devil», izay niakaran’ny onjan-drano ny harambato. Na any Nusa Dua aza dia misy ny "torapasika tsy miankina", ny fidirana amin'ny alàlan'ny hotely. Ny iray amin'ireo hotely toy izany tsara indrindra dia i Samabe. Eny amoron-dranony no ahitanao fasika fotsy sy rano mitroatra.
Io torapasika io dia scythe ary ny sakany tsy latsaky ny 1 km. Taloha dia vohitra fanjonoana io ary misy trano fandraisam-bahiny ankehitriny. Ireo trano fandraisam-bahiny ireo dia be mpahalala indrindra 4 sy kintana 5, na dia somary matanjaka noho ny Nusa Dua aza, ka madio hatrany ireo torapasika akaiky azy ireo. Ny fasika amin'ny moron-dranomasina ireo dia tsy ny ranomandry, fa tena mahafinaritra. Ny iray amin'ireo hotely toy izany tsara indrindra dia Grand Mirage. Ny tena avaratra indrindra an'i Ben Benoa dia ivon'ny fialam-boly rano, izay azo hisafidy eto isaky ny tsiro rehetra. Izy io dia manolotra ny zava-drehetra avy amin'ny snorkeling mankany amin'ny rano ambanin'ny rano ao anaty spacesuits ary "scooter ambanin'ny rano".
Tanjung Benoa dia amoron-tsiraka lava be, fa ny tondradrano avo dia toa tsy dia milomano kokoa raha milomano raha ampitahaina amoron-dranomasin'i Nusa Dua. Misy koa fiantraikany ny lasa fanjonoana - betsaka ny sambo fanjonoana tsy lavitra ny morontsiraka sy ny ranomasina. Noho ny fiatoana, any amin'ireo toerana tsy misy sambo, dia misy lakandrano izay anamboarana feon-tsoavaly izay mahafinaritra ny fiatrehana ny maraina, ary koa ny milomano na dia amin'ny onja ambany aza, izay mety ho an'ny fianakaviana manana zanaka. Matetika ny goavambe dia mijanona eo akaikin'ireo lava-bato toa izany, noho izany dia tsy milomano mivantana amin'ny moron-dranomasina ireo sambo sy jet skis eto. Noho izany, misy fahafahana hilomano milamina tsy misy tahotra ny zanakao. Ireo lagy ireo dia mipetraka akaikin'ny Sol Beach House Benoa, izay miasa amin'ny sehatra rehetra. Miaraka aminy, ho an'ny olona rehetra (tsy ho an'ny vahiny amin'ny trano fandraisam-bahiny ihany) dia misokatra ny klioba amoron-dranomasina, ary koa ny trano fisakafoanana The Chedi Sakala.
Torapasika atsimo atsinanana
Sanur dia toeram-pivarotana lehibe kokoa sy milamina kokoa raha ampitahaina amin'i Kuta, saingy làlana kely kokoa noho i Nusa Dua izy io. Betsaka ny mpizahatany zokiolona izay tonga any Bali avy any Etazonia sy Eoropa Andrefana, ary matetika nohenoina matetika ny Rosiana noho ny any amin'ireo trano fandraisam-bahiny hafa ao amin'ny nosy. Ny kafe sy ny trano fisakafoanana miserana amoron-tsiraka, ny hotely eto no lafo be, fa afaka mahita trano fonenana bebe kokoa ao an-tanàna ianao. Be dia be ny torapasika eo an-toerana, milamina ny ranomasina fa akaikin'ny morontsiraka. Mba hahatratrarana ny halalinao dia mila mandeha mandohalika ianao mandritra ny ampolony metatra ao anaty rano.
Ity fiasa ity dia mitarika amin'ny fisafidianana fa ny tora-pasika any Sanur dia matetika nofinidin'ny fianakaviana manana ankizy izay mahomby indrindra ny rano. Na ireo izay mipetraka eo amorontsiraka hafa aza dia azo antoka fa tonga any amin'ny torapasika Sanur farafaharatsiny indray mandeha - raha tsy milomano, dia farafaharatsiny misakafo any amoron-tsiraka, jereo ny fantsom-pifandraisana akaiky, safidio safira, na ho an'ny snorkeling sy ny fisakafoanana - misy sekoly maromaro amin'ity. Sambo maro avy any Sanur no mankany amin'ny nosy Lembongan sy Gili.
Manaraka ny morontsiraka dia misy lalana lava be ho an'ny mpandeha an-tongotra sy mpandeha bisikileta, rakotra asfalt. Ny mandeha amin'ny maraina sy ny fandehanana amin'ny hariva mahafinaritra dia tena tsara. Amin'ireo fitsangantsanganana dia tena tantaram-pitiavana, izay ny olona maro te hanao fakantsary sary. Amin'ny maraina, avy amin'ny tora-pasika ao Sanur, nahafinaritra anao ny volkano Agung.
Akaikin'ny tanànan'i Padang Bay ao Bali no misy ny morontsiraka mahafinaritra Bias Tugal, izay miafina amin'ny maso mony, noho izany dia antsoina hoe "tsiambaratelo". Misy fasika fotsy mahagaga. Mba hahatongavana amin'ity tora-pasika ity dia mila mivily miankavia akaikin'ny seranan-tsambo ianao ary mitondra fiara manaraka ny lalana mankany amin'ny faran'ny azy, izay hita eo amin'ny havoana iray. Eo no misy ny fiara sy ny zaridaina bisikileta. Mandritra ny lalana tokony hizoranao mankany amin'ny tora-pasika izay very eo amin'ireo harambato. Tena mahazo aina sy milamina tsara izy io.
Miaraka amin'ny seranana akaiky, ny ranomasina eto dia madio tanteraka ary matetika tsy milamina kokoa - amin'ny lafiny rehetra dia afaka milomano ianao. Ny trano dia mety ho hita ao amin'ny tanànan'i Padang Bay, fa ny tsy fahitana azy dia saika tsy hita eto. Ny tora-pasika no hiangavy ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy izay tia fialantsasatra miala voly amin'ny natiora. Izy io dia mety amin'ny fianakaviana manana zanaka.
Izy ity dia farihy mahafinaritra ho an'izay tia ny fialan-tsasatra amin'ny rano. Ny snorkeling dia azo atao avy hatrany amin'ny morontsiraka. Na izany aza, na dia ny sambo izay misy mpitari-dalana mahalala toerana izay misy biby maro ao anaty rano mandeha etsy sy eroa. Azo raisina any amin'ireo toerana ireo na amin'ny torapasika mifanila aminy izy ireo, ary avy eo entin'izy ireo miverina ao amin'ny Blue Lagoon. Somary tery ihany ity tora-pasika ity, tsy misy na inona na inona ny morontsiraka eto, mandritra ny tondradrano avo dia dibo tanteraka, fa amin'ny haavon'ny 3 m dia misy fanafihana kely izay misy toeram-pisotroana kafe, massage ary fihenan'ny masoandro.
Mifindra avaratra avy any Padang Bey, dia tonga any Candidasa ianao. Ity ampahany amin'ny Bali ity dia tena vatosoa any amin'ny morontsiraka atsinanana. Milamina sy mahafinaritra izany, saingy misy ny tsy fahampian-drano - iray ihany ny tora-pasika misy fasika, ary eo no misy azy, na dia tsy lavitra an'i Chandidasa aza, fa mihoatra kosa. Ary any Chandidas ny tenany, ny morontsiraka tsirairay dia mainty ary marefo, tsy mendrika hilentika ny masoandro. Noho izany, ny mpizahatany matetika dia milentika sy milomano manaraka ny dobo. Mety mitombina ny ho tonga any Chandidasu raha mikasa ny hilomano ao anaty ranomasina ianao, tsara ny trondro tropika ary miaina ao anaty rivo-piainana mahafinaritra ao amin'ilay villa. Izy io dia mety amin'ny orinasa lehibe iray ary fianakaviana iray manana zanaka. Azonao atao ny mijanona eto fotsiny amin'ny hotely hivezivezy eto mankany amoron-dranomasina samihafa amin'ny morontsiraka atsinanana.
Iray amin'ireo torolàlana tsara tarehy indrindra any Bali, fantatra ihany koa amin'ny maha-Pantai Beach. Vantany vao fotsy tanteraka ilay izy, na izany aza ankehitriny, ny firoboroboana volkano ankehitriny no hita matetika. Na izany aza, ny Fotsy Fotsy dia tsy nisy fiatraikany lehibe tamin'izy ireo, rakotra fasika mitovy ihany, malefaka sy mahafinaritra izany.
Izany dia saika ny iray ihany amoron-tsiraka any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy, izay mety ho an'ny filomanosana tanteraka sy ny fiposahan'ny masoandro. Ny tora-pasika iray hafa any amin'ity faritry ny nosy ity dia azo raisina ihany hoe Bias Tugal, saingy tsy dia malaza ary tsy dia ilaina loatra. White Sand dia torapasika midadasika izay tsy be olona noho ny halaviran'ny toerana fizahan-tany sy ny seranam-piaramanidina. Betsaka ny fiakaran'ny masoandro eto. Matetika mangatsiaka sy tony ny ranomasina, tsy misy onja. Noho izany, Sand Sand dia mety haka voly amin'ny ankizy. Manakaiky ny sisiny dia namboarin'ny vatolampy mahafinaritra, izay mety ho toy ny toerana voajanahary ho an'ny sary tsimoka eny amoron-dranomasina. Misy ihany koa ny kafe 10 izay azonao atao ny mamy sy misotro jus na labiera. Ireo orinasam-panorenana ireo dia manolotra ny mpanjifany miloko lakana maitso, lamba famaohana ary elo.
Ny tsy fatiantoka amin'ny Fotsy White Sand dia ny tsy fahampian'ny trano eo akaiky, fa vokatr'izany dia tsy misy loatra ny fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra ary manelingelina mpivarotra. Tonga teto izy ireo mandritra ny 1 andro, avy any amin'ny toerana hafa ao amin'ilay nosy na tonga ireo izay mipetraka ao Chandidas.
Amed dia tanàna sy faritra iray any amin'ny morontsiraka avaratra Bali. Saika na aiza na aiza dia misy ranomasina mahafinaritra ihany, izay misy endrika tony sy fahadiovana ary mangarahara. Any akaikin'ny morontsiraka no ahitanao harano, akaikin'ny trondro marevaka mahafinaritra. Ho an'ny snorkeling, tsy mila mandeha mionom-pivezivezy na aiza na aiza, azo atao ny mandeha milamina any akaikin'ny morontsiraka. Ny morontsiraka amoron'i Amed dia vato na rakotra fasika mainty manana vava volkano. Betsaka ny fanjonoana eto amoron-dranomasina, ka ny morontsiraka eto tsy dia tsara.
Ity faritra ity dia ao atsimon'i Amed. Ity misy vohitra any Bunutan, ary ny tora-pasika eo akaikiny dia manana ny anarana hoe Pondok Vienna, ary koa ny trano fandraisam-bahiny izay mitovy anarany. Io torapasika io matetika no antsoina hoe Lipach. Amin'ny toerana rehetra amoron-dranomasina dia afaka mahita famantarana miaraka amin'ireo entana roa ireo ianao. Hotel Pondok Vienna dia mipetraka mivantana eo amoron-dranomasina. Raha mandao ny efitrano ianao dia afaka, aorian'ny dingana 15, dia mahita ny tenanao amin'ny rano ranomasina. Tsotra ny hotely, fa avo ny vidin'ny efitrano.
Any afovoan'ny tora-pasika amin'ny antoandro dia misy sambon mpanjono, izay mandeha amin'ny alina ho an'ny alina, miverina amin'ny maraina fotsiny. Rakotra fizaran-tany kely ny sisiny amin'ity tora-pasika ity. Ny tora-pasika akaikin'ny hotely voalaza etsy ambony dia avo lenta. Rakotra fangaro misy fasika mainty sy fotsy izy io, misy fidirana iray tena ilaina amin'ny ranomasina. Ny akaiky azy dia mora kokoa ary hotely lafo kokoa ihany koa. Ny sasany amin'izy ireo dia mipetraka eo amin'ny havoana iray, avy amin'ny toerana hisokafan'ny ranomasina. Ho an'ny toeram-ponenana ela kokoa, ny trano kely misy lakozia koa dia hita eo akaikin'ny tora-pasika.
Eto mivantana amin'ny morontsiraka dia misy trano fandraisam-bahiny iray hafa, Bali Bhuan, izay manolotra karazana efitrano samihafa, manomboka amin'ny efitrano mba hisarahana trano, na dia amin'ny dobo manokana manokana aza. Ho an'ny ranomasina tsara, Ameda sy ny manodidina dia mampiavaka ny toetra terrestrialy. Eto ianao dia afaka mankasitraka ny havoana an-tendrombohitra, izay feno ahitra sy volkano.
Ity tanàna ity, izay hita kilometatra vitsivitsy any avaratr'i Amed, tsy misy zavatra hafa mahaliana. Vato ny tora-pasika eto, saingy mbola misy zavatra manintona azy izay mendrika indray mandeha mitsidika ny morontsiraka eo an-toerana - izany dia ny sambo Liberty, ary 30 metatra miala ny morontsiraka fotsiny. Ity sambo ity dia lohahevitra tiako indrindra ho an'ireo mpanentana vaovao.
Raha tsy te-hitafy fitaovana scuba ianao dia afaka mijery an'i Liberty na amin'ny saron-tava tokana iray - ny tapany ambony amin'ny sambo, rakotra alàka, akorandriaka ary haran-dranomasina, eo amin'ny halalin'ny 2 m fotsiny avy eo amin'ny rano. Ity tora-pasika ity, amin'ny fotony, dia mety ho an'ny filatsahana, satria, ankoatry ny Liberty, dia misy toerana hafa any ambanin'ny rano.
Ny anarana hoe "Lovina" dia mahazatra amin'ny tora-pasika maromaro indray mandeha (Temukus, Kaliasem, Kalibukbuk, Tudakmugga, Amturanu Peramon) any amin'ny morontsiraka avaratr'i Bali.
Ireo torapasika ireo dia mampiavaka ny sakany mivelatra, ny fisian'ny fasika volkano, ny felany mavo, ny volo ary ny mainty, raha tsy misy fasika fotsy sy tany paradisa, ny hazo rofia amin'ny morontsirak'i Lovina dia tsy mivoatra, na izany aza misy hazo midadasika roa lehibe izay mamorona voajanahary. aloka.
Milamina ny ranomasina eto, ambany ny vidin'ny trano, milamina ny fialan-tsasatra fianakaviana miaraka amin'ny ankizy. Tsy manan-karena ho an'ny famolavolana ny toeram-pisakafoanana, fa trondro sy hazan-dranomasina vaovao foana no tratry ny mpanjono amin'ny sambo eo akaiky eo. Ny tena manintona indrindra eto dia ny dia mandeha amin'ny feso. Sambo maro no miantsona ao anaty ranomasina isaky ny maraina mba hahita azy ireo. Noho izany tanjona izany dia ny ankamaroan'ny mpizahatany tonga any Lovina.
Ireo nosy akaiky
Ny fialan-tsasatra tsara indrindra amoron-dranomasina any amin'ny nosy kely akaikin'i Bali dia azo atao any Gili. Avy any Bali amin'ny sambo (seranan-tsambo any Padangbai sy Sanur) dia afaka mandeha mandeha ao anatin'ny iray sy sasany ka hatramin'ny roa ora.
Ny hany nosy telo any Gili dia kely dia kely, tsy manana fitaterana afa-tsy soavaly misy sarety izy ireo. Azo atao ny mandalina azy ireo an-tongotra (mandeha an-tongotra manodidina ny perimeter) dia mety handeha na amin'ny bisikileta. Ary koa, ny nosy telo samy hafa dia samy tsy mitovy.
Gili Trawangan no lehibe indrindra amin'izy ireo, izay mahasarika indrindra ny tanora, misy kafe maro, trano fisotroana miaraka amin'ny hookah, fotoam-pivavahana mavitrika, fety isan'andro. Any amin'ny ilany iray amin'ny nosy ihany no misy ny faritra amoron-dranomasina, izay ametrahana ny zava-drehetra amin'ny fomba mirindra.
Gili Air - nosy iray izay toerana faharoa ao amin'ny faritra ary misy tora-pasika manamorona ny vakim-paritra. Manakaiky ny morontsiraka dia somary matevina, ary amin'ny fialam-boly kely fotsiny dia mety amin'ny toerana iray any amoron-tsiraka ihany.
Gili Meno no nosy tsara indrindra amin'ireo telo mba miala sasatra amin'ny tora-pasika. Ny morontsiraka eto dia rakotra fasika fotsy, ny halalin'ny halaliny dia ahafahanao milomano na dia mandritra ny rihana ambany aza. Nefa io nosy io dia tsy misy rofia amin'ny morontsiraka, toa ny nosy Gili roa.
Avy amin'ny seranan'i Sanur any Bali dia afaka mankany Lembongan ao anatin'ny 25 minitra. Ity dia nosy kely iray izay, na izany aza, misy trano fandraisam-bahiny misy karazany, miainga amin'ny trano fandraisam-bolan-trano ka hatramin'ny trano fandraisam-bahiny 5-kintana. Ny trano fandraisam-bahiny dia hita eo akaikin'ny morontsiraka, ary eo amin'ny vatolampy kely iray akaikin'ny hantsana dia hita izy ireo ary hita ao amin'ny faritra lalina ao amin'ny nosy ary manana fomba fijery mahavariana.
Ny fialam-boly mavitrika dia malaza eto - ny fisitrihana, ny fitsangatsanganana anaty rano, ny fikosoham-boto, ny fako, ny fampandehanana ary ny famafazana.
Ny nosy iray tena tsara tarehy manakaiky an'i Lembongan, saika maniry, miaraka amoron-dranomasina roa, na izany aza, raha mihevitra azy io ho tsy misy tora-pasika io dia mety ho an'ny olona tia ny natiora. Tonga eto Lembongan ny ankamaroan'ireo mpizahatany. Ny toerana tsara indrindra hisitrana an'i Nusa Penida, afaka milomano miaraka amin'ny taratra manta be ianao, ary ny olona tsy tia milentika dia mandany fotoana amin'ny tora-pasika tsy miankina. Ity nosy ity dia anjakan'ny hotely sy tranobe mahazatra, izay maro amin'izy ireo no tsy mila rano mafana, Internet ary fantsona an'habakabaka.
Ny torapasik'i Chandidasa
White Sand Beach / Valan-jaza fotsy
Amin'ity faritra ity, tsy lavitra ny tanàna dia misy farihy izay fanta-daza sy fasika fotsy. Antsoina hoe White Sand Beach na White Sand Beach / Chine Beach. Izay antsoina hoe Jasri Beach ihany koa.
Address: Jl. Raya Bukit Asah No. Desa, Adat Bugbug, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali 80851, Indonezia
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/k4vocEiB8aUicnPt5с
Beach Labuan Amok
Reniranon'i Labuan Amok - Pantai Labuan Amok, akaikin'i Candidasa
Reniranon'i Labuan Amok - Pantai Labuan Amok
Coordinates ho an'ny fitaterana: https://goo.gl/maps/m1mSmpj979JmTrXLA
Padang Bai (Pantai Bai Bai). Torapasika ho an'ny sambo filanjana
Amoron-dranomasina Padang bai
Ny tora-pasika dia zara raha milomano noho ny hamaroan'ny sambo jono. Tsy manakana azy tsy ho tsara tarehy anefa izany. Mandritra izany fotoana izany dia misy mponina maro be avy any Bali izay manolotra ny fikambanan-dry snorkeling sy ny fisidina.
Coordinates ho an'ny fitaterana: https://goo.gl/maps/5MEa9BPdxaxVWKPZ8
Secret Beach Bias Tugal - Morontsiraka Bias tugel
Angamba ny fanazavana momba ny tsiambaratelony dia lany andro :). Tena tsara ny tora-pasika. Fotsy fotsy, rano azure. Ny fotodrafitrasa dia efa zatra toa ny torapasika Bali.
Beach Bias Tugel Beach - Beach Bias Tugel
Address: Padangbai, Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali 80871, Indonezia
Coordinates ho an'ny fitaterana: https://goo.gl/maps/AMYKMXb8z599Uu2R9
Morontsiraka manga any Lagoon
Coordinates ho an'ny fitaterana: https://goo.gl/maps/PtushGS6C1LqPg9A6
Torapasika any Kuta
Kuta dia misy tora-pasika lehibe. Ny halavany dia 5 km. Raha ny tena izy dia telo amoron-dranomasina, Legian Beach, Kuta Beach ary Seminyak, izay mifandray amin'ny tora-pasika iraisana iray.
Fasika io torapasika feno fasika volontany mafana
Fotodrafitrasa Kuta Beach
Eto ianao dia afaka manofa masoandro sy sunbathe araka izay tianao. Amin'ny maraina, tora-pasika no diovina amin'ny alàlan'ny mpiasan'ny tetikasa iraisan'ny Coca-Cola sy Quicksilver. K beach beach dia mety amin'ny fisafoana. Ny halavan'ny torapasika amoron-dranomasina eto dia kilometatra maromaro, ary malefaka ny onja. Noho izany, ireo vao manomboka afaka mianatra hiondrana. Betsaka ny mpiady amin'ny tora-pasika eo amin'ny tora-pasika, manofa birao sy fampianarana eny amin'ny surf. Misy sekoly dimy misosa koa miaraka amin'ny mpampianatra miteny Rosiana.
Kuta Beach Disadvantages
Ny tsy fatiantoka amin'ity tora-pasika ity dia ny mpivarotra marobe izay manararaotra ka mangataka hividy souvenir na gilasy, ary koa ireo mpitsabo mpanasa. Ny bustle, izay mahazatra an'i Kuta, dia mandeha amin'ny tora-pasika. Betsaka ny mpizahatany, anisan'izany ny Australianina sy ny Eropeana. Ny Indoneziana tenany ihany koa dia tsy hita, indrindra amin'ny faran'ny herinandro.
Tora-pasika akaikin'ny Hotely Bali Legian, Seminyak
Seminyak. Beach Seminyak. Beach
Tora-pasika ao SeminyakBeach any Seminyak
Pantai any Bolong
Torapasika any Bukit. sarintany
Balangan (morontsiraka Balangan, na Pantai Balangiray)
Padang Padang (Pantai Padang Padang)
Diloilo ao amin'ny kianja filalaovan-javaboary any amin'ny kianja filokana
Bingin (Bingin Beach)
Tora-pasika azo vonoina
Beach Nyang Niang
Ranomasin'i Tanjung Benoa
Ny tora-pasika eo an-toerana dia mety tsara amin'ny fiposahan'ny masoandro sy ny maraina.
Dawn ao amin'ny Pantai Sanur
Eny amoron-dranomasina, fasika tsara tarehy Sanur
Fotodrafitrasa amoron-dranomasina Sanur
Surfingitra, onja eny, fitsangantsanganana ety amoron-dranomasina Sanur
Eo koa ny faritra misosa afaka miasa mandritra ny fotoanan'ny orana. Mandritra izany fotoana izany, ny ankamaroan'ny Japoney sy Indoneziana no mitaingina eto.
Amin'ny vanim-potoana maina mandritra ny rivotra any Sanur dia misy fotoana tsara ahafahan'ny rivodoza sy ny fitsangantsanganana lay.
Mitsangantsangana amin'ny Sanur
Na dia lavitra ny tsara indrindra aza ny fisakafoanana eto Sanur, dia antsasaky ny antsasaky ny mpandraharahan'ny fisotroan-dranomasina Bali lehibe indrindra.